Xukuumada Siilaanyo Waxay U Muuqataa Inay Fashilantay Qarankiina Fashilisay Masuul Ka Tirsan Xisbiga Wadani. | Burco Media
Xukuumada Siilaanyo Waxay U Muuqataa Inay Fashilantay Qarankiina Fashilisay Masuul Ka Tirsan Xisbiga Wadani.
Madaxdii dawlada ee loo doortay inay qaranka nabadiisa iyo horumarkiisa iyo himiladii bulashada ka midho dhaliyaan oo meel gaadhsiiyaan ayaa haatan ku mashquulsan inay ilaaliyaan waxa shacabka iyo axsaabta mucaaradku ku hadlayaan iyagoo ka baqaya in fashilaadooda laga hadlo oo ay soo baxdo. Waxay marayaan inay dadka kelmedaha ay ku hadlayaan iyagu u dooraan oo dawladii dhamayd ay Grammar-ka iyo macnaha ereyada ku mashquusho sida “Gole” lama bixi kartaan, Dood ma diidanine kelmeda “QARAN” ayaanu anagu haysanaa. Hadii aydaan wixii rasmiga ahaa iyo doodiiba diidanayn maxaa erey magac ahaan loo isticmaalay laga diidaa? Ma isticmaal kelmedeed ayaad wadanka waxaas oo buuq ah u gelinaysaa?! Waar maa runta la sheego. Dawladan kelmeda QARAN isticmaalkeeda dadka u diidani miyaanay ogayn in axsaabtu axsaab qaran yihiin.
Waxay ku celcelinayaan shirweyne qaran waxa qabankara madaxweynaha oo qudha, waxa ay isdhaafinayaan si badheedh ah in axsaabta mucaaradku waxa ay qabanayaan ay tahay dood lagaga doodayo arimaha qaran ahaan inaga qabyada ah iyo kuwa inaga qaloocday ee dawladani qaloocisay.
Waxa dawladu si badheedh iyo cabudhin ah u hortaagantahay in axsaabta mucaaradku gutaan shaqadii ay u xilsaarnaayeen ee ay qaranka u hayeen ee ay ku metelayeen shacabkii soo doortay, laakiin waxa la yaab leh dawladu arintan waxay isku deyaysaa inay ku qariso inay tidhaa “Hayaay”!! madaxweynaha ayaa shaqadiisii lagu haystaa, taasi miyaanay ka dhignayn “hasha geela cunta ee cabaada”, miyaanay dawladu mucaaradka shaqadoodii ku haysan?
Waxaan dhegaystay wasiirka arimaha Gudaha Mudane Cali Maxamed Waran Cadde oo leh dooda qaran waxa dabada ka wada rag u adeegaya cadawga Somaliland: Mudane wasiir cadawga SL ma waxa u adeegaya ninka leh aynu ka hadalo waxa inaga khaldan si aynu u saxano, mise waxa u adeegaya ninka leh yaan la ogaan waxa khaldane aamusa oo car hadla? mudane wasiir ma waxa cadwga Somaliland u adeegaya ninka wixii aynu labaatanka sano dhisaynay ee golayaal qaran, axsaab iyo saxaafad madax banana ahaa qaar ka takhalusay oo godka ku hubsaday, qaarna xabsiga ku hubsaday inta hadhayna hadda u heesaya ee u hanjabaya mise ninka leh waar bal aynu qiimayno xagee u soconaa? Mudane wasiir ma waxa cadawga Somaliland u adeegaya ninka leh waar go’doonkan siyaasadeed ee aynu caalamka ka galay, aan is weydiino waxaa ina geliyay iyo sidii aan uga bixi lahayn, mise waxa cadawgeena u adeegaya xukuumada intay dalkii go’doomisay weliba leh yaan laga doodin sidii go’doonka looga bixi lahaa? Mudane wasiir ma waxa cadawga SL u adeegaya muwaadinka yidhi ha laga doodo sidii looga bixi lahaa qabyaaladda gaadhay in Ciyaartoydu beelo u kala saftaan, oo fanaaniintu reero u kala saftaan oo ah meelo aanay weligeed qabyaaladi gaadhin, mise waxa cadawga SL u adeegaya ninka leh laga doodi maayo dhibka qabyaaladu dalka ku hayso?
Mudane wasiir waxaad tidhi waxa la rabaa inaynu u egaano Somaliya. Ma aan doodno oo daneheena ka hadlo ayaa Somalia inoo ekaysiinaysa mise aamusa oo car hadla? Ma baarlamaankii shiray ee go’aanka gaadhay go’aankoodii ha shaqeeyo ayaa Somalia inoo ekaysiinaysa mise shir-gudoonka oo la kala qaybiyo oo go’aano isku lid ah iska soo daba saara ayaa Somalia inoo ekaysiinaysa? Ma aan nabadgelyadan xumaatay iyo hubkan caasimada lagu sito ee ragii madaxda ahaa maalinba mid la rasaasaynayo waxa keenay ka doodno ayaa Somalia inoo ekaysiinaysa mise in Hargeysa dhexdeeda oo laisku rasaaseeyaa ay caadi noqoto ayaa Somalia inoo ekaysiinaysa?
Mudane wasiir, doodan axsaabta mucaaradku qabanayaan waxaad u sawirtay in ay xidhiidh la lahaan karto Somaliaya, lana rabo in khal khal lagu geliyo xasiloonida JSL. Mudane wasiir Xidhiidhka Somalia ma waxa u dhow; ninka kor iyo hoosba ula shira ee wax uu kula shirana aan la ogayn, ninka aan u jawaabayn marka ay Somlia yidhaahaan Somaliland waxaanu ka wada hadalay midnimo, Ninka kula heshiiyay in Hawada Somlia oo dhan meel laga wada xukumo, waa yaabe miyaanay taa daba socon in dhulka Somalia oo dhana meel laga wada xukumo?, mise wasiir adiga waxa Somaliya xidhiidhkeeda kuula dhaw ninka yidhi bal aan is waydiino waxa aynu ka faaiidnay iyo waxa aynu ku khasaaray shirarkan ma dhalayska ah ee ay dawladeenu la gasho Somalia?.
Mudane wasiir wadanka ma waxa khalkhal gelinaya ninka dood cilmiyeed danaha qaranka ku saabsan qabta mise ninka sida aad sheegtay haya faylasha iyo sirta dad cadawga kula soo heshiiyay inay SL kharbudaad ka sameeyaan ee qarinaya, ee yidhi hadii aan doodan la joojin faylalashaa Ayaan kashifi doonaa? Waa yaabe wasiir waa maxay macnaha ku jira in ninka aad ku qaban wayday heshiis sida aad sheegtay uu cadwga la soo galay aad ku qabanayso in uu dood ciliyeed qabto am ka qayb galo?. Miyaanay u ekaanayn uun dembi u samayn, si loo joojiyo doodaa ay dawladu ka werwer qabto in ay ceebeheedu ku soo if baxaan. Mise ceebaha dawladu ka baqayso inay soo if baxaan ayaa Somalia qayb ka tahay oo hadaaba dawladu tuur-tuurka iyo far isku fiiqa sii bilaabaysaa?
Waxaan ku soo gebagebaynayaa, axsaabta mucaaradku way cadeeyeen dooda ay qabanayaan iyo waxa ay ku saabsan tahay. Waxa iyana cad in xukuumadda iyo dadka u doodayaa ay ka hadlayaan shirweyne qaran oo ay iyagu uun ka hadlayaane aan jirin. Taariikhduna way xusi doontaa khaladka halkaa ku jira iyo cida ka masuulka ah. Umad la yidhaa car hadalna waxay dhasho waynu naqaanaa. Xukun lagu waarayo iyo mid xoog iyo kahsab lagu haysan karayo midna ma jiree waxaan odhan lahaa xukuumadu dib ha isugu noqoto, oo dalka iyo dadka dhibka ha ka dayso. Hanaankii dawladnimo ee umadu 20-sano dhisaysayna yaan dib loo celin.
Waxaan leeyahay runta ha lagu soo dhawaado iyadaa dani inoogu wada jiraaye. Axsaabta mucaaradku dooda way qabanayaan, wixii inaga dhiman iyo wixii dawladu khaladayba waa laga doodayaa. Waana nidaamkii aynu dooranay ee axsaabta badan. Axsaabta mucaaradku waxay ka mid yihiin nidaamka dawladnimadeena, waa axsaab QARAN.
Maxamed C/laahi Ciise
Xubin Gudiga Arimaha Debedda Waddani